itoobiya iyo maamulka somaliland oo ku heeshiyey inay wada shaqeeyaan | shiniilenews.com
itoobiya iyo maamulka somaliland oo ku heeshiyey inay wada shaqeeyaan
Hogaamiyaha xisbiga Kulmiye islamarkaana ah musharaxa madaxweynaha maamulka Somaliland, Muuse Biixi, ayaa la kulmay ra’isulwasaaraha Itoobiya mar uu booqasho ku tagay Itoobiya.
Hailemaraim Desalegn ayaa sheegay in labada dhinac ka xoojoodeen sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta dhismaha, gaar ahaan jid isku-xidha Berbera iyo Itoobiya.
Wasiirka gaadiidka ee Itoobiya, Axmad Shide, ayaa dhankiisa ka sheegay in ra’isulwasaare Hailemaraim uu u xaqijiyey wafdiga Somaliland in iskaashi noocaas ah ay labada dhinac si caadi ah uga faa’iidi karaan. Shide ayaa sheegay in labada dhan isla soo qaadeen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhanka amaanka, nabada iyo sidii masiibada abaaraha loo yarayn lahaa.
Dawalada Itoobiya ayaa maamulada kala duwan ee Soomaaliya dhamaantood xidhiidh dhow la leh si ay danaheeda gaarka ah uga fushato.
Booqashada wafdiga Somaliland ayaa ku soo beegantay xilli Soomaaliya oo idil laga soo dhaweeyey doorashada madaxweynaha cusub ee dalkaas- Maxamad Cabdullahi farmaajo. Masuulkan ayaa la sugaya mowqifkiisa ku aadan Itoobiya iyo sida ay dalkiisa ula dhaqanto.
Ergyada Somaliland ayaa tibaaxday in laga wada-hadlay sidii loo sii xoojin lahaa degananshaha ka jira gobolka iyo iskaashiga dhanka ganacsiga ee ay labada dhan wadaagaan. Xudunta wada-xaajoodka ayaa ahaa dhismaha dariiq isku-xidha Itoobiya iyo Berbera iyo sidii deeq waxbarasho loo siin lahaa ardayda Somaliland.